General Nhoroondo ye Africa - Vol 6 (PDF) - Afrikhepri Fondation
Kunyoresa / Login
Chitatu, Gunyana 23, 2020
kugashira Bhuku rePDF
General Nhoroondo ye Africa - Vol 6 (PDF)
min kuverenga 2 min
General History of Africa (Volume 6)
LVhoriyamu VI inofukidza nhoroondo ye Africa kubva pakutanga kwezana ramakore re1880 kusvika kuchikwambo chemasimba eEuropean colonies pamakondinendi kubva muna XNUMX. Pasinei nekuwedzera kwekutaura kweEuropean yekutengeserana, yechitendero uye yezvematongerwo enyika Munguva iyi, simba rekunze rakange risina chekuita chakawanda munharaunda dzeAfrica, uko kwakave nekuteedzana kwekuyedza mutsika kwekuyedza, kuwedzera nekuvandudza zviripo. Kuteerana kwakapetwa kwezviitiko zvine chikwereti kubva kunze - iyo Mafecane yekumaodzanyemba kwe Africa, nemagariro ayo pakati uye kumabvazuva kwe Africa, uye mafambiro evano shandura maMuslim muWest Africa - inoratidzika zvakanyanya mumasere zvitsauko zvehuwandu uhu.
Iri bhuku rinotanga pamwe nezvitsauko zvina zvine musoro zvakatemerwa kune masimba makuru anoshanda munharaunda yeAfrica pakutanga kwezana rino, chinzvimbo chinoshandura Africa muhupfumi hwenyika, maitiro matsva nemaitiro ari basa uye mhedzisiro yekubviswa kwekutengeswa kwevaranda. Ivo vanoteverwa nezvikamu makumi maviri nematatu zvakapirwa mukuvandudza mamiriro ezvinhu mumatunhu akasiyana. Mukupedzisa, zvimwe zvitsauko zviviri zvinotarisa kudhizaina kweAfrica uye kutora hukama hwematongerwo enyika, hupfumi uye hutsika hwekondinendi iri pamberi pekurwiswa kweEurope.
Nhoroondo Yese yeAfrica, vhoriyamu 6: Africa yezana ramakore regumi neshanu kusvika kutenderera 19s
1 yakashandiswa kubva € 85,00
Tenga 85,00 €
kubva munaGunyana 23, 2020 1:02 AM
Edition 1996 - Reprint 2011
Number Of Pages 934
Iyo donga, iyo nhare yemuchadenga yevarwi vakashinga veSurma vanobva kuEtiopiya
André Pinto Rebouças, muvambi weiyo torpedo
Dzidziso yaRamana Maharshi (Audio)
Wakafarira peji redu here?
Tsvaga chikamu Sarudza chikamu Kuti ibudiswe AFRIKHEPRI-TV KUVA NOKUSHA EBOOKS LIBRARY ugari AFRICAN CUISINE MHURI WEVADZIDZI VEMBA ENTERTAINMENT Documentary VANA ENVIRONMENT URANDA ZVIMWE ZVAKAITIKA BUSINESS FACTS VAFARIDZI VAFRICA MAMVIDHIYO ACHARAMBA NHOROONDO YAKANAKA NOKUTANGA AFRICAN INITIATIONS Registration / LOGIN BLACK INVENTORS AND SAVENTS KINDLE THE VOICE OF KAMA bhukusitoo LIVE TV BHUKU ROKOTENGA AUDIO BOOK Bhuku rePDF MUSIC NEWS, NEWS PARADIGM KAMIT KAMITE KUTI VANHU VAKAFUNA AFRICAN AND SAGES PHILOSOPHY & PSYCHOLOGY Philosophy uye Psychology Health and Medicine PLAYLIST nhetembo PSYCHART Therapy DZIMAMBO DZEMAFRIKA UTENYU NEMISANGANO SAYENYERI NEMISSTERI SHOPPING UZIMWE NEZVAKRISTU SPORT TEXTS OF MATTHIEU GROBLI URGENT / NEWS VIDEOS Web-TV
Une chokwadi chekuti unoda kuvhura iyi post?
Kuvhurwa kuruboshwe: 0
Une chokwadi chekuti unoda kudzima kunyoresa?